कलाकारको वर्ष दिन : कोको तानिए विवादमा ?( महानायकको विवाददेखि पलको गिरफ्तारीसम्म) – OnlinePahar
२८ माघ २०७७, बुधबार १३:४१ Basanta Khanal	0 Comments	manoranjan
काठमाडौँ । विसं २०७७ आजदेखि बिदा हुँदैछ । कोरोना कहरमै सुरु र अन्त्य भएको यो वर्ष नेपाली कला क्षेत्रका लागि सुखद रहन सकेन । जम्मा ४ वटा मात्रै फिल्म प्रदर्शनमा आएकाले यो वर्ष फिल्म निर्माणका हिसाबले पनि निराशाजनक रह्यो ।गीतसङ्गीतको कुरा गर्ने हो भने यो वर्ष साङ्गीतिक बजारमा थुप्रै गीतसङ्गीत भित्रिए । तर, कालजयी र सदाबहार गीतको अभाव भने खड्किरह्यो । अश्लील एवं भद्दा शब्दले भरिएका केही गीत र रिमेक भर्सनले भने साङ्गीतिक बजार तताउन सफल रहे ।काम र सिर्जनाको हिसाबले शून्यजस्तै रहेको २०७७ बिर्सन लायकको वर्ष बनेको छ । नेपाली कलाकारका विवाद वा स्क्यान्डल भने यो वर्ष धेरै देखिएको छ । तीमध्ये दर्जन (१२) घटना यस्ता छन्।१) महानायक विवाद :
नेपाली कला क्षेत्रमा वर्षकै चर्चित घटनाका रूपमा ‘महानायक’ विवादलाई हेर्न गरिन्छ । एक टेलिभिजन कार्यक्रममा अभिनेत्री तथा निर्देशक दीपाश्री निरौलाले ‘राजेश हमाल पनि महानायक हो र ?’ भनेर दिएको अभिव्यक्ति देश तथा विदेशमा मात्र चर्चित भएन । यसले मिडियामा ‘महानायक को हो ?’ भन्ने बहस सिर्जना गरायो ।दीपाश्रीले उक्त अन्तर्वार्ताका कारण मानसिक तनावसमेत झेल्नुपर्&zwj;यो । सामाजिक सञ्जालमा उनका ट्रोल बने । अश्लील गाली समेत खेपेकी दीपाश्री अझै सो घटनाबाट मुक्त हुन सकेकी छैनन् । पछि अभिनेता राजेश हमालले अभिव्यक्तिमार्फत घटनाको सटडाउन गरे ।
२) पल शाहविरुद्ध उजुरी :अभिनेता पल शाहविरुद्ध गत फागुनमा इलाका प्रहरी कार्यालय धरानमा दुव्र्यवहार र कुटपिटका विषयमा परेको उजुरीले पनि यो वर्ष मिडिया तताउन सफल रह्यो । फिल्मभन्दा म्युजिक भिडियोमा अभिनय धेरै गर्ने पलविरुद्ध चलचित्रकर्मी महासङ्घ प्रदेश १ का अध्यक्ष अरुण प्रधान प्रहरीमा पुगेका थिए । म्युजिक भिडियोको सुटिङका लागि धरान पुगेका पलले आफूमाथि आक्रमण गर्न लगाएको प्रधानको आरोप थियो । प्रहरीले पल र प्रधानलाई सँगै राखेर छलफल गराएपछि विवाद मिलेका थियो । दुवैले प्रहरीको अगाडि एक अर्काेसँग माफी माग्दै विवाद मिलाएका थिए ।
३) भुवनलाई साम्राज्ञीको आरोप : वर्षका चर्चित घटनामध्ये अभिनेता भुवन केसी र अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहबीचको विवाद पनि पर्छ । अभिनेत्री शाहले केसीलाई फिल्म छायाङ्कनका क्रममा विभेद गरेको, ह्यारेसमेन्ट लगायतका केही आरोप मिडियामार्फत लगाएकी थिइन् साम्राज्ञीको आरोपलाई गलत भन्दै खण्डनमा उत्रिएका भुवन शाहविरुद्ध जिल्ला अदालतमा पुगेका छन् । अदालतमा यो मुद्दा विचाराधीन छ । विवादले आगामी दिनमा कस्तो मोड लिन्छ अदालतको फैसलापछि मात्र भन्न सकिन्छ ।
४) कोमल वली विवाद :गायिका एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य कोमल वलीको विषयमा नेकपा एमालेका नेता रघुजी पन्तले गरेको टिप्पणी पनि यो वर्ष मिडियाको प्राथमिकतामा प¥यो । पन्तले गत फागुन १५ गते एक कार्यक्रममा पिँडौला देखाएर सांसद भएको भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । पन्तको टिप्पणीविरुद्ध वलीले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिन् । आफू अन्यायमा परेको भन्दै मुद्दा दायर गरेकी वली र पन्तबीचको विवादको विषय अहिले अदालतमै अल्झिएको छ ।
५) पूजा– प्रकाश लफडा :अभिनेत्री पूजा शर्मा र सञ्चारकर्मी प्रकाश सुवेदीबीचको विवादले यो वर्ष राम्रै चर्चा पायो । सुवेदीले एक टेलिभिजन कार्यक्रममा ‘दारा भएकी नायिका’का रूपमा टिप्पणी गरेका थिए, जुन टिप्पणीविरुद्ध पूजा रुँदै कलाकार सङ्घ र मिडियामा पुगेकी थिइन् ।
कलाकार सङ्घ र सुवेदी कार्यरत एपी वान टेलिभिजन बीचको छलफलबाट विवाद मिलाइएको थियो ।
६) दुर्गेशको अज्ञानता :गायक दुर्गेश थापा पनि यो वर्ष विभिन्न कारणले चर्चामा रहिरहे । एकपछि अर्को गल्ती गर्दै उनले आफूलाई चर्चाको केन्द्रमा राखे । दुर्गेशको गीत ‘बीच्च बीच्चमा २’ मा एउटा पुरानो गीतका दुई लाइन हुबहु चोरेकोदेखि टेलिभिजन कार्यक्रममा बाल्ने नजानेरसमेत चर्चामा रहे । उनको यो गीतको शब्द मात्र होइन, म्युजिक भिडियो पनि विवादमा पर्यो ।
म्युजिक भिडियोमा दुर्गेशसहितका पुरुष कलाकारहरु साडी लगाएर महिलाको भेषमा प्रस्तुत भएका थिए । यो विषयमा महिलाहरुको अपमान भएको भनेर आलोचना गरियो ।ऋषि धमलालाई दिएको अन्तरवार्ताका कारण पनि दुर्गेश थप विवादमा मुछिए । अन्तरवार्तामा उनले ‘स्वर सम्राट नारायण गोपालको भनेर भक्तराज आचार्यको र यम बरालको भन्दै रामकृष्ण ढकालको गीत गाएका थिए । दुवै गीत बेसुरमा गाएका दुर्गेश बेसुरा गीत गाएको र सङ्गीतको ज्ञान नभएको भन्दै ट्रोलदेखि मिडियासम्मको निसानामा परे ।
७) स्वेताको समाजसेवा :
अभिनेत्री स्वेता खड्काको विवाह र समाजसेवा यो वर्ष विशेष चर्चाको विषय बन्यो । उनको विवाहले मिडियामा राम्रो प्रथामिकता पायो नै त्योभन्दा बढी चर्चा उनले सिन्धुपाल्चोकमा निर्माणको क्रममा अलपत्र छोडेको ‘एकीकृत माझी बस्ती’को भयो ।केही सञ्चार माध्यमले उनले माझी बस्ती अलपत्र छोडेको, बस्ती निर्माणको पैसा विवाह र भोजभतेरमा खर्च गरेको समेत समाचार बनाए । यही कारण उनले माझी बस्तीको विषयमा सामाजिक सञ्जालमार्फत पटक पटक स्पष्टीकरण पोस्ट गरिन् ।
८) मनिषा र वर्षाको नक्सा अभिव्यक्ति :भारतले आफ्नो दाबी गरेको लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी सहितको नक्सा नेपाल सरकारले आफ्नो नयाँ नक्सामा समेटेर जारी गरेको थियो । उक्त नक्साको विरुद्धमा भारतीय मिडियाले कोकोहोलो गर्दै विभिन्न भ्रामक समाचार बनाए । भारतीय फिल्म नगरीबाट चर्चा कमाएकी अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले समेत नक्साको विषयमा नेपालको समर्थन गरिन् । अभिनेत्री वर्षा राउतले भने यो विषयमा अन्तरवार्तामा सीमा विवादले भारतका साथीहरुसँग ‘फेस’ गर्न गाह्रो भएको अभिव्यक्ति दिइन् । उनको यो भनाइलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल लगायत चारैतिरबाट उनीमाथि प्रहार भयो । ‘वर्षा लैजा लिम्पियाधुराले’ जस्ता नारासमेत गुन्जिए ।ट्रोलर तथा मिडियाका निसानामा परेकी वर्षाले सामाजिक सञ्जालमार्फत लामो स्टाटस पोस्ट गरेर माफी मागिन् । कतिले माफीलाई ठिकै भने, कतिले नाटक बताए ।मनिषा कोइरालाले भने भारतविरोधी अभिव्यक्तिका कारण नेपालमा प्रशंसा पाइन् । भारतमा भने उनको चर्को आलोचना भयो ।
९) ‘भिटेन’ पक्राउ :गीत सङ्गीतमा अश्लील र भद्दा शब्द प्रयोग गरेर बेलाबेलामा आलोचना र सामाजिक प्रयोगकर्ताको तारो बन्दै आएका नेपाली र्&zwj;यापर तथा गायक समिर घिसिङ ‘भिटेन’ यो वर्षको कात्तिकमा पक्राउ परे । महानगरीय प्रहरी अपराध अनुसन्धान महाशाखाले उनलाई जावलाखेलबाट पक्राउ गर्‍यो । अश्लील गीतहरू गाएको आरोपमा पक्राउ परेका उनी गीत युट्युबबाटै हटाएपछि तारेका छुटेका थिए ।
१०) सुष्माको क्लबमा लफडा : अभिनेत्री सुष्मा कार्की र पत्रकार उत्सव रसाइलीबीच एक क्लबमा भएको विवाद प्रहरीमा पुग्यो । उत्सव र आरती खड्का लगायतले क्लबमा आफूमाथि कुटपिट गरेको भन्दै सुष्माले प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन् ।प्रहरी प्रभाग, दरबारमार्गले दुवै पक्षको छलफलबाट उक्त विवाद मिलाएको थियो । छलफलमा उत्सव र आरतीले सुष्मासँग माफी मागे ।
११) ‘दोहोरी च्याम्पियन’मा कल्पना :नेपालमा पहिलोपटक यो वर्षबाट सुरु भएको ‘दोहोरी च्याम्पियन’ सुरुमै विवादमा फस्न पुग्यो । यसका निर्णायकले कलाकारको बेइज्जत गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जाललगायत सबैतिर आलोचना भयो । निर्णायक चन्द्र शर्माले लोकदोहोरी गायिका कल्पना दाहाललाई भाइरल साइरन वाली भन्दै कार्यक्रममार्फत बेइज्जत गरेका थिए । यो विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालदेखि सबैतिर निर्णायक र आयोजकको आलोचना हुन थाले पनि आयोजकले पत्रकार सम्मेलनमा स्पष्टीकरण दिएर घटना टुङ्ग्याउने काम गरे ।
१२) राष्ट्रिय झण्डाको दुरुपयोग :मकवानपुर जिल्लाको बागमती गाउँपालिकास्थित विष्णु आधारभूत विद्यालयको प्राङ्गणमा खिचिएको एक म्युजिक भिडियोमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा जलाएको विषयसमेत यो वर्ष चर्चामा रह्यो । यही अभियोगमा गत भदौमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाको टोलीले गायक ग्याल्जोम दोर्जे तामाङसहित ९ जनालाई गिरफ्तारसमेत गरेको थियो ।‘देशद्रोही’ शीर्षकमा मङ्गोल हप अफिसियल युट्युब च्यानलबाट राष्ट्रिय झण्डा जलाइएको भिडियो अपलोड भएपछि यसको तीव्र विरोध भएको थियो ।
← दैनिक सेयर कारोबार अवधि ५ घण्टा बनाउने नीति असफल भएकै हो त ?
वर्ष को अन्तिम दिन नेप्सेमा नयाँ रेकर्ड : २०७८ मा यी समूहका सूचकहरुमा अझै माथि जाने संकेत →